हामी नाम गर्नुपर्ने ब्रिटिश फुटबल, पहिलो खेलाडी को एक, वास्तविक दन्त्यकथा कुरा भने - यो टाढा 1915 मा जन्म भएको थियो जो विंग Midfield Stenli Metyuz छ। यसलाई कसैले आफ्नो खेल फेला कि असम्भाव्य छ, तर उहाँले ब्रिटिश फुटबल, पनि एक पौराणिक कथा राख्न ल्याए कति। उहाँले राष्ट्रिय नायक र सबैभन्दा भाग धेरै लामो क्यारियर लागि खेलेका क्लब, को एक पौराणिक कथा भयो। Stenli Metyuz - खेल को इतिहास मा एक अविश्वसनीय व्यक्ति छ, र तपाईं उहाँले एक फुटबल खेलाडी रूपमा आफ्नो जीवनमा हासिल गर्न सकेन ठ्याक्कै के थाहा हुनुपर्छ।
प्रारम्भिक क्यारियर र उदेकलाग्दा सफलता
के Stenli Metyuz यसलाई स्पष्ट धेरै, धेरै प्रारम्भिक भयो, साँचो फुटबल प्रतिभा छ। पन्ध्र वर्षको उमेरमा उनले तुरुन्तै व्यग्र काम गर्न थाले जहाँ क्लब "स्टोक सिटी", को फुटबल एकेडेमी साथ दिए। अर्को वर्ष सोह्र केटा पहिले नै पहिलो एक पेशेवर टीम को भाग र दुई पटक सबै सिजन रूपमा क्षेत्र मा देखियो। उहाँले क्लब को युवा टोली लागि प्ले समय बाँकी। उहाँले लन मा आफूलाई पाइने सिजन को पन्ध्र मिलान मा - - एक वर्ष पछि, आफ्नो चरम युवा बाबजुद, यो धेरै स्थिर क्षेत्र देखा पर्न थाले छ र पनि आफ्नो आफ्नो क्यारियर को पहिलो लक्ष्य स्कोर व्यवस्थित। वयस्क जीवनको मैथ्यू, उहाँलाई एक व्यावसायिक सम्झौता साइन इन गर्न क्लब अनुमति जो, माथि उडान मा क्लब को रिलीज संग coincided, र "स्टोक सिटी" त्यहाँ रहन धेरै लामो समय अनुमति हदसम्म प्लेयर को सफलता, दोस्रो लिग बन्द लिइरहेको छैन भनेर। छ पूर्ण मौसम Stenli Metyuz 236 मिलान यो समय को लागि प्ले र 51 बल संग स्कोरिङ, क्लब मा बिताए। तर, घटनाहरु को स्थिर पाठ्यक्रम हस्तक्षेप द्वितीय विश्व युद्ध - मात्र तीन मिल्नेहरू फुटबल च्याम्पियनशिप को कार्य निलम्बन गरिएको छ, जो पछि, 1939 मा प्ले थिए। पूर्ण खेल गतिविधि मात्र 1946 मा पुन: सुरु, र त्यो सिजन मैथ्यू टी-शर्ट "स्टोक सिटी" को लागि अन्तिम थियो - उहाँले, 28 खेल प्ले पाँच गोल र "Blackpool" सारियो।
को "Blackpool" गर्न संक्रमण
यो खेलाडी मा हडताली, सर Stenli Metyuz रूपमा उहाँले धेरै, धेरै लामो समय, आजको खेलाडीहरू विपरीत तीस वर्ष पछि गर्ने पूर्ण व्यावसायिक क्यारियर प्ले छ। विरलै गर्ने तीस-पाँच पछि कार्य जारी छ। तर तीस-दुई वर्ष मा मैथ्यू बस तुरुन्तै एक प्रमुख खेलाडी बनेको र चौध वर्ष त बाँकी एक नयाँ क्लब, सारियो। उहाँले आफ्नो भूमिका एक बिट परिवर्तन भएको छ किनभने "स्टोक सिटी" मा सकेसम्म धेरै गोल गरेको छैन। स्वाभाविक, उहाँले छिटो आफ्नो युवावस्थामा रूपमा थियो, तर अझै पनि प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा खतरनाक रह्यो। Stenli Metyuz - "Blackpool" 428 मिलान, तिनीहरूलाई मा अठार लक्ष्य स्कोरिङ को एक भाग खर्च गर्ने खेलाडी। को फुटबल क्लब को आफ्नो पन्ध्रौँ सिजन एकदम खुसीसाथ थाले, तर क्लब पहिले नै जवान र होनहार खेलाडी ध्यान, नीति परिवर्तन गर्न थालेका छ, त्यसैले 1961 दिग्गज खेलाडी अन्तिम दुई मिलान पछि आफ्नो घर क्लब, खुसीसाथ यो स्वीकार गर्ने फर्के।
"स्टोक सिटी" फर्कन
र उहाँले "स्टोक सिटी" दिग्गज Stenli Metyuz को 46 वर्षीया छात्रा फर्के। पृष्ठभूमि र मिडफिल्डर को लक्ष्य सबै आज सम्म मारा, तर उमेर जो तिनले पनि आश्चर्य, प्ले गर्न छोडेनन्। आखिर, उहाँले पचास वर्षको हुँदा, आफ्नो क्यारियर समाप्त गर्ने निर्णय गरे। त्यसैले तिनले "स्टोक सिटी" को लागि प्ले चार वर्ष, 66 पटक क्षेत्र बाहिर आए र पाँच लक्ष्य स्कोरिङ। मात्र पछि यो पौराणिक फुटबल खेलाडी एक पेशेवर क्यारियर पूरा घोषणा।
के इङ्गल्याण्ड गरेको Metyuz Stenli को इतिहासमा योगदान? प्लेयर को खेल जीवनी उपलब्धिहरू एक विस्तृत विविधता समावेश, र तिनीहरूलाई थुप्रै क्लब र अन्तर्राष्ट्रिय प्रदर्शनमा संग जडान छन्। पहिलो पटक लागि इङ्गल्याण्ड शर्ट मैथ्यू उन्नाइस को उमेर मा प्रयास गर्यो - 1934 मा। तब देखि, त्यो टोलीमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण भागहरु मध्ये एक बन्न र धेरै अन्त सम्म लगभग यति रहेका छ। तपाईंले पहिले नै उहाँले 1965 मा, पचास वर्ष को उमेर मा पूरा के क्यारियर थाहा छ, तर राष्ट्रिय टोली खेलाडीहरू एक सानो पहिले बायाँ। पचास-चार मिलान र एघार लक्ष्य पछि मैथ्यू 42 वर्ष को उमेर मा 1957 मा टोली बाँकी।
क्लब स्तरमा सफलता
माथि उल्लेख गरिएझैं आफ्नो लामो क्यारियर लागि मैथ्यू धेरै हासिल गर्न सक्षम थियो। यो पुरस्कार क्लब आउँदा, त्यहाँ सम्बन्धित सफल प्रदर्शन को एक ठूलो भाग हो, "Blackpool", "स्टोक सिटी" एक उच्च दर भएको कहिल्यै। 1933 मा, र त्यसपछि तीस वर्षपछि - - 1963 मा यो सजिलै दोस्रो प्रभाग मा मात्र दुई संग्रामहरू जीतेको हासिल गर्न प्रबन्ध स्टेनली क्लब संग भन्ने तथ्यलाई देखि देख्न सकिन्छ। तर प्रसंगवश पनि 1948 र उहाँले एफए कप अन्तिम पुग्न व्यवस्थित 1951 मा सर्वश्रेष्ठ ब्रिटिश टोली सूची मा भएको जो, छ कहिल्यै, तर हराएको दुवै अवसरमा क्लब "Blackpool," संग। यो केवल 1953 मा, मैथ्यू को पदक माथि आफ्नो टाउको उठाउन सक्षम थियो। तर माथि यो पुरस्कार - क्लब गरेको सफलता फुटबल खेलाडी रूपमा नजिक 1956, को "Blackpool" को प्रिमियर लिग मा दोस्रो स्थान लिएको छ जब मा चयन भएको थियो, तर टोली एक च्याम्पियन बन्न पर्याप्त थिएन।
इङ्गल्याण्ड, स्कटल्याण्ड, वेल्स र उत्तरी आयरल्याण्ड - इङ्गल्याण्ड मैथ्यू राष्ट्रिय टोलीमा गर्दा ब्रिटिश घर च्याम्पियनशिप, चार देशहरूमा भाग जसमा तार जीत टाढा एक पटक भन्दा बढी सफल भयो। 1935 देखि 1955 को लागि, मैथ्यू साथ इङ्गल्याण्ड को दिल मा यो च्याम्पियनशिप मा नौ पटक जित्यो। तर, यो सबै यो अद्वितीय फुटबल खेलाडी जीत गर्न सक्षम थियो जो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ट्राफियों छ। र पछि हामी आफ्नो विशिष्टताको बारेमा कुरा गर्दै छन्, तपाईं पनि व्यक्तिगत पुरस्कार मा एक नजर लिनुपर्छ, उहाँले आफ्नो लामो क्यारियर भन्दा प्राप्त गर्न सक्षम थियो।
1948 मा, Stenli Metyuz आफ्नो पहिलो व्यक्तिगत पुरस्कार प्राप्त - उहाँले युरोप मा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी नाम थियो। को "सुनको बल" - 1956 मा, त्यो एक खेलाडी लागि सबैभन्दा प्रतिष्ठित व्यक्तिगत पुरस्कार पायो। एक वर्ष पछि, उहाँले ब्रिटिश साम्राज्यको आदेश प्राप्त, र 1963 मा युरोप मा सबै भन्दा राम्रो खेलाडी नाम थियो सफलता बारम्बार र फेरि। 1965 मा, त्यो पनि नाइट स्नातक, एक वर्ष पछि पौराणिक खेलाडीहरू सयौं सूची मा भनिन्थ्यो थियो। 2002 मा, posthumously, उहाँले अंग्रेजी फुटबल को फेम को हल मा समावेश र 2007 मा टोलीमा खेलाडी को एक द्वारा चयन गरिएको थियो "Footballers शताब्दीमा।"
व्यक्तिगत जीवन Stenli Metyuza सन्दर्भमा, सबै कुरा एकदम रोचक छ। 1934 मा, उमेर 19 मा, उहाँले Betti Vellans विवाह, पाँच वर्ष पछि तिनीहरूले पहिलो बच्चा जीन थियो, र पाँच वर्ष पछि - दोस्रो बच्चा, स्टेनली जूनियर तिनीहरूले फुटबल क्यारियर को अन्त पछि सम्म एक सुखी परिवार रूपमा बस्ने एक लामो समय को लागि, मैथ्यू एक कोच र दान कामदारको रूपमा युरोप वरिपरि यात्रा गर्न सुरु गरेको छैन। र 1967 मा, 52 वर्षीया Briton चालीस वर्ष पूरा Mila, चेकोस्लोवाकिया मा एक अनुवादक रूपमा काम गरे। तिनीहरूले सम्बन्ध थाले, र स्टेनली यो आफ्नो साँचो प्रेम, उहाँले सबै मेरो जीवन को लागि प्रतीक्षा गरिएको थियो थियो भनेर बुझे। फलस्वरूप, उहाँले तीस-तीन वर्ष पुरानो लागि बस्ने कोसँग, बेट्टी छोडपत्र, र संसारभरि यसको यात्रा जारी जो माइल, विवाह गरे। उहाँले 85 वर्ष को उमेर मा 2000 मा मृत्यु भएपछि, एक वर्षको लागि बस्ने - त्यो स्टेनली सामना गर्न जो संग सक्छ, 1999 मा मृत्यु भयो। त्यसैले अंग्रेजी को इतिहास मा सबैभन्दा ठूलो खेलाडी एक को जीवन, र दुनिया, फुटबल समाप्त भयो।
प्रिस्कूल मुख आमाबाबुको लागि मनोरंजक गणित
को Janissaries को हुन्? "Janissaries" को अर्थ
एक घर नेटवर्क कसरी बनाउने र स्थानीय विस्तार गर्न
किन र के कलेजो दुख्छ: सम्भावितकारण, लक्षण र उपचार
सर्वेक्षण सेटअप, समीक्षा: कार्यक्रम भर्चुअल राउटर स्विच गर्नुहोस्। भर्चुअल पहुँच बिन्दु वाइफाइ सिर्जना